ကယ်လိုရီတွေလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ် လိုအပ်ပါတယ်။ ရေဓာတ်နည်းနည်းခမ်းခြောက်ရင်တောင် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်နှေး...
အသက် 30 မှ အသက် 40 အတွင်းစားသင့်သောအစားအစာများ
အသက် 30-40 အရွယ်ဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်ကထက် တာ၀န်တွေများသထက်များလာတဲ့ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်၀င်နေတဲ့သူတွေဆိုရင် လ...
ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရသူတွေဟာ ရောဂါဒဏ်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုများပြီး စိတ်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါခံစားနေရသူတွေမှာ အောက်ပါ ထင်ရှားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတစ်မျ...
ကလေးငယ်တွေကို ဆံပင်ညှပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာ ကမ်ဘာပျက်မတတ် သောင်းကျန်းကြတာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ?
3.10.2017 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးငယ်တွေဟာ အသက် 14 လက စတင်ပြီး (တစ်ခါတစ်ရံ အသက် 5-6 နှစ်ထိတိုင်အောင်) ဆံပင်ညှပ်ခံရမှာကို အလွန်အမင်း ကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့...
နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုမခံရမီ တစ်လအလိုကပင် ခန္ဓာကိုယ်မှ ဖော်ပြနေသော သတိပေးလက္ခဏာ 8 ခု
1. မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း (70% သော အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်ပွားခြင်း)
သာမန်မဟုတ်တဲ့ မောပန်းနွမ်းနယ်နေမှုဟာ နှလု...
ဘာကြောင့်ချက်ကြိုးကို ဖြတ်သင့်တာလဲ? - ကလေးငယ်ကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး မိခင်တွေဟာ ကလေးအချင်းကို မဖြတ်ပစ်ဘဲ နှစ်ပတ်ခန့်ကြာအောင်ထားခြင်းဟာ အလွန်ပင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြုအမူဖြစ်ကြောင်း သတိပေးပြောကြား
3.10.2017 | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ချက်ကြိုးကို မဖြတ်ပစ်ဘဲ ဒီအတိုင်း ကြွေကျမယ့်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းတဲ့ မိခင်တွေ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ များပြားလာပါတယ်။ အချင်းနဲ့အတူ ကလေးကိ...